Hacking & Web Security - Olana azo antoka avy amin'ny Semalt
Ny fihokoana dia nanjary olana mahazatra manoloana ny ankamaroan'ny mpampiasa aterineto androany. Ho an'ny olona mananaE-varotra tranonkala e-commerce, miala amin'ny hackers dia iray amin'ireo fomba tsara indrindra ahafahana miantoka ny fiarovana amin'ny tranokalanao. Na izany aza, tsy vitantsika ny mametraka izanyao an-tsainao rehefa manao drafitra amin'ny tranonkalanay. Ny ankamaroan'ny e-varotra dia manao fampiasana lehibe amin'ny tolotra ara-barotra amin'ny aterineto toy ny Search EngineOptimization (SEO) ary koa ireo tetikady ara-barotra ao amin'ny marketing - attrezzature palestra outdoor. Na izany aza, zava-dehibe ny mampiditra endri-javatra sasany amin'ny fanoritsoroana ny automatisiefiarovana amin'ny hackers. Ny fepetra toy izany dia afaka manome antoka ny mpitsidika sasany rehefa mivezivezy amin'ny tranokalanao.
Andrew Dyhan, mpitantana ny Success Successor Semalt ,dia mamaritra fomba sy fomba fiasa hacking sasany hamahana azy ireny.
Tsy misy toe-javatra izay manolotra drafitr'asan'ny bala mba hahazoana antoka ny fahamarinanan'nytoerana. Na izany aza, misy fepetra sasantsasany izay azon'ny olona entina sy ahafahana manao ny dingana manontolo. Ireto ny sasany amin'ireto fomba ireto:
Ilaina ny fampiasana tenimiafina matanjaka. Azonao atao ny manakana ny hacker tsy hahazo alalanany tranokalanao amin'ny fampiasanao ny tenimiafina azo antoka. Ny tenimiafina toy ny 12345 sy ny anaran'ny ankizy dia afaka mamorona soso-kevitra sasantsasany momba ny olona iraymiaraka amin'ny fanirian-dratsy. Vokatr'izany dia zava-dehibe ny mampiasa ny tenimiafina izay tsy misy na iza na iza afaka maminavina..Manova ny tenimiafina amin'ny fototra tsy tapakadia afaka manao fepetra fiarovana fanampiny amin'ny tranonkala, hanatsara ny fiarovana azy ireo. Amin'ny test hafa, afaka mampiasa ny tenimiafina azo antokampamorona mba hampatanjaka ny fiarovana azy ireo.
Ny sasany amin'ireo fomba famoretana mahazatra dia mitaky HTTPS tsotra mba hisakanana azy ireo. Hyper TextNy Protocol Transfer Secure dia ahafahana mampifandanja ny fampahalalana misy eo amin'ny tranonkala iray sy ny navigateur. Ity fomba ity dia manome sehatra fiarovana miavakaizay tsy mahasosotra ny hacks tsotra sy ny fanevatevana. Ireo fanafika mahazatra izay azonao atao amin'ny fampiasana ny HTTPS dia ahitanao ny Scripts amin'ny Site Cross sy ny SQLtsindrona. Ireo teknika ireo dia mampiasa ny vulnerability ny code web-site sy ny karazana server.
Spams sy Phishing
Ireo mpitsoa-ponenana dia ireo olona izay mandefa hafatra maro sy mailaka maoderina mba tsy hahatsikaritraniharam-boina. Ny antony ao ambadik'ireo fanafihana isan-karazany ireo dia matetika tsy mazava, mampiseho olona maro eo an-tanan'ny hackers. Maro ny hosoka aterinetomitranga amin'ny fanampian'ny spam. Afaka mifindra amin'ny serivisy mailaka azo antoka ianao mba hahazoana fiarovana betsaka amin'ny mailaka maimaim-poana. Amin'ny hafaireo tranga ireo dia afaka misoroka ny fanafihana ireo hafatra ireo amin'ny alàlan'ny fampiasana filalaovana spam.
Manana karazan-javatra maro ny aterineto. Tsara ny manamboatra zavatra samihafafanitsiana rehefa nanamboatra ny tranonkalanao. Ny hackers dia mampiasa ny vulnerabilities izay maneho ny tenany ao amin'ny code de site sy ny servertenany. Ny fiarovana ny tranokala iray sy ny an'ny olona mampiasa izany dia miankina amin'ny fahombiazan'ny fomba fanoherana hacking amin'ny toerana. Mitovy amin'nyNy vokatr'izany dia zava-dehibe ho an'ny mpandraharaha tsirairay ny miaro ny fiantohana sy ny fiarovana ny fampiasana aterineto eo amin'ny tranonkala. Ity toro-lalana ity dia misy sasanyIreo teknikam-piraketana fototra izay ahafahan'ny tranokalan-tsika mahazo tombontsoa maro. Afaka manao fanitsiana sasany ianao ary manatsara ny fiarovanany tranokalanao.